Bill Gates ပြောတဲ့ အောင်မြင်သောသူဖြစ်ရန်(အများနှင့်မတူ)လုပ်ဆောင် ရမည့် အချက်(၁၀)ချက်။
They commit to their goals( မိမိ၏ ပန်းတိုင်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း)
When successful people setagoal, nothing gets in their way of achieving it. They commit 100 percent to the outcome, knowing that one difference between successful and unsuccessful people is that the successful ones commit toagoal and don’t stop until they achieve it. အောင်မြင်သောသူသည် ရည်မှန်းချက်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ သူ့လမ်းကြောင်းမှာရရှိခြင်းဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ဟာရလဒ်ကို 100% အထရရှိခဲ့တယ်။ အောင်မြင်သောသူနှင့် မအောင်မြင်သောသူကြားကွာခြားချက်ကိုသိခြင်းသည် ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို သိသောကြောင့် သူတို့ပန်းတိုင်မရောက်မချင်း ကြိုးစားမှုကိုမရပ်ဘူး။
And they persist until they achieve them (အောင်မြင်မှုရသည် အထိစွဲမြဲစွာဆောင်ရွက်ခြင်း)
Obstacles to success are normal and should be expected. They can’t always be planned for. However, you can decide when you commit to success that you’re going to persist no matter what obstacles arise. Go around them, go over them, or push through them, but persist no matter what happens. That’s what successful people do, and so should you if you want to mimic their success. အတားအဆီးအခက်အခဲဆိုတာအောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကြုံတွေ့ရမှာ သဘာဝ ဘဲ။ သူတို့အဲ့အတွက်အမြဲလိုလိုအစီစဉ်မချနိုင်ဘူး။ သို့သော်လည်းဘယ်လောက်အခက်ခဲတွေဘဲ ကြုံကြုံ မင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လလမ်းကြောင်းကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်။ ခြုံငုံလေ့လာပါ ၊ ရှေ့ကို ကြိုတွေးပါ (သို့) တွန်းအားပေးပါ သို့သော် ဘာတွေဘဲဖြစ်လာဖြစ်လာစွဲမြဲစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ မင်းအောင်မြင်သူတွေကိုအတုယူချင် သူတို.လိုဖြစ်ချင်လျင် သူတို့ဘာလုပ်လဲ ပဲ လေ့လာပါ။
They take responsibility (တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းရှိရမည်)
Successful people know that they are the masters of their own destiny. You don’t hear them complain about the things that stopped them from success. You won’t hear them make excuses. Instead, they push forward knowing that they are the only thing that will make or break their success. အောင်မြင်သောသူတွေဟာမိမိတို့ ကံကြမ္မာ၏ သခင်ဖြစ်ကြောင်း ကိုသိတယ်။ သူတို့အောင်မြင်မှုအတွက် ပက်သက်၍ ရပ်တန့်စေမည့် အကြောင်းတရားများနားမထောင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ဆင်ခြေကို မင်းကြားရ လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့အောင်မြင်မှုကိုကျော်လွန်ပြီးရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့်အရာများကိုပို၍ တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
They work hard( အလုပ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပါ။ )
Have you ever met someone who is super-successful and lazy? Neither have I. The truth is that the road to success is paved with hard work. If you want to achieve great results, you’ll need to wake up early, stay up late and put in your time. Success doesn’t just come to those who want it. You’ve got to pay your dues. မင်းအောင်မြင်သောသူ ၊ ပျင်းရိသော သူတို့ကိုတွေ့ဆုံဘူးပါသလား? အောင်မြင်သောလမ်းကြောင်းရှိအခက်ခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမှသာလက်တွေ့မှာအောင်မြင်မှုရရှိမည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်လျင် “စောစောထပါ ၊ နောက်မကျစေဘဲ အချိန်မှီ ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ အောင်မြင်မှုဟာ ကိုယ့်ဆီ တိုက်ရိုက်မလာပါ။ မင်းရဲ့ခွန်အားစိုက်ထုတ်မှသာရရှိနိုင်မည်။
Find people who are doing what they want and emulate them
A college professor once gave me some of the best advice I ever received. He said, “if you want to be wealthy, hang out with wealthy people. If you want to be funny, hang out with funny people. And if you want to be poor, hang out with poor people.” ကောလိပ်ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဆီကအကောင်းဆုံးအကြံညဏ်တစ်ချို့ရရှိခဲ့တယ်။ သူက “မင်းချမ်းသာချင်လျင် ချမ်းသာသောသူနှင့် အပေါင်းအသင်းလုပ်ပါ။ မင်းပျော်ချင်တယ်ဆိုဟာသညဏ်ရွှင်တဲ့သူနှင့် အပေါင်းအသင်းလုပ်ပါ။တကယ်လို့သာ မင်းဆင်းရဲချင်တယ်ဆိုဆင်းရဲတဲ့သူနှင့် အပေါင်းအသင်းလုပ်ပါ။” လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ The truth is that people naturally mimic the behaviors of those around them. Mindset is contagious. So if you want to beabig success in life, spend time with others who are already successful. ပတ်ဝန်းကျင်၏ အပြုအမှုတွေကို သဘာဝအတိုင်းအတုယူနေသူများလည်း ရှိသည်။ အတွေးအခေါ် အပြုအမူတွေဟာကူးစက်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မင်းဘ၀မှာ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိချင်လျင် အရင်ကတည်းက အောင်မြင်ပြီးသားသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ။ Don’t know anyone successful? That’s ok. You can read books written by them or about them. Listen to their radio interviews or watch them on TV. Attitude and success is contagious, so catch it by hanging around some of the greats. အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမှ မသိဘူးလား? ကောင်းပြီလေ…. သူတို့ ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ သူတို့ အကြောင်းတွေကိုမင်းလေ့လာနိုင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အင်တာဗျူး အသံလွှင့်မှုတွေ နားထောင်ပြီး သူတို့အကြောင်းကို TV ကနေစောင့်ကြည့်ပါ။ အပြုအမူနှင့် အောင်မြင်မှုကကူးစက်တတ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးတွေထဲကမှ တစ်ချို့ကိုမင်းအမိအရဖမ်းဆုပ်ရယူပါ။
They believe in themselves and their vision( မိမိရဲ့ အမြင်နှင့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါ )
The school of hard knocks ain’t easy, so if you want to achieve big results, you’ve got to believe in yourself. The world’s most successful people have unshakeable confidence in themselves and in their vision. Without it, they’d have to give up too easily afterafew obstacles got in their way. ကျောင်းရဲ့ စည်မျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့ မလွယ်ကူဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မင်းသာ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု ရရှိချင်လျင် မင်းရဲ့ အမြင်ကို လုံးဝယုံကြည်ရမည်။
ကမ္ဘာမှာအအောင်မြင်ဆုံးသောသူတွေကသူတို့ကိုယ် သူတို့နှင့် သူတို့ရဲ့ အမြင်ကိုအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ အဲ့ဒီ့အရာတွေသာမရှိလျင် သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာသူတို့ အတားအဆီးနည်းနည်တွေ့တာနဲ့ လွယ်ကူစွာအရှုံးပေးလိုက်ရမှာပေါ့…။ How’s your confidence? Do you believe you can achieve your dreams? I’ll tell you something in case nobody told you before: you can do whatever you want in life, you’ve just to first believe it, and then work like mad to get it. မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလား? မင်းအိမ်မက်တွေ မင်းရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်သလား? ဒီအကြောင်းမင်းဘယ်သူမှ မပြောခင် ငါပြောချင်တာက မင်းဘ၀မှာ ဘာဘဲလိုချင် လိုချင် ရအောင်လုပ် ၊ မင်းအဲ့ဒါတွေရမယ်လို့တော့ယုံကြည်ထားပြီးနောက် မင်းအလုပ်ကို ထပ်ပြီးရူးသွပ်ရမည်။
They take care of themselves( မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပါ)
When was the last time you sawasuccessful person who was obese or extremely overweight? Sure, these people exist, but they’re the exception to the rule. Most successful people know they need energy to get ahead, and the best way to have that is to eat right, exercise and get proper rest. Which brings us to our next point… မင်းအားလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ထားသောအောင်မြင်သောသူတစ်ယောက်ကိုဘယ်အချိန်ကမြင်ခဲ့တာလဲ? သေချာတာကအဲ့လူရှိချင်မှ ရှိလိမ့်မယ် သို့သော် သူရဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေဘဲ။ အအောင်မြင်ဆုံးသူတွေကရှေ့သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအားတွေကိုသိရှိပြီးသူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကတော့ မှန်ကန်တဲ့စားသောက်မှု သင့်တော်တဲ့ အနားယူမှုနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။ထိုမှတဆင့်စွမ်းအားတွေရယူတယ်နောက်တစ်ချက်သို့ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်…..
They rest and recharge( ကောင်းစွာအနားယူ၍ အားအင်ပြန်ဖြည့်ခြင်း)
Hard work isarequirement for success, but you can only push yourself 24/7 for so long. Successful people work hard and then unplug so they can refresh their minds and bodies. အောင်မြင်မှုအတွက် အလုပ်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ သို့သော် မင်းဒီထက် ပိုပြီး (၂၄) နာရီ (၇) ရက်ပတ်လုံးတွန်းအားပေးဖို့တော့လိုတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာအလုပ်အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင် ပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ စိတ်နှင့် ခန္ဒာကို ပြန်လည် အားဖြည့်တယ်။ If you’ve been pushing it to the limit, think about unplugging foralong weekend or more. Once you get back to the grind, you’ll be more effective at getting the results you want. ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအကန့်အသက်ရှိလာလျှင် ပိတ်ရက်(သို့) ပိတ်ရက်ထက်ပိုတဲ့ အနားယူဖို့လိုကြောင်းသတိပြုပါ။ မင်းတစ်ကြိမ်အားအင်ပြန်ဖြည့်တိုင်းမင်းလိုချင်တဲ့အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။
They constantly learn( စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူပါ )
Successful people believe that learning never ends. This doesn’t mean they’re going to school to get new degrees, although they may. Even without formal education, they’re constantly reading and learning from others around them, perhaps from books, trade magazines or conferences, or from others who are ahead of where they want to be. လေ့လာမှုကဘယ်တော့မှ မပြီးဆုံးလေ့မရှိဘူး။ ဒါဟာကျောင်းသွားပြီးဘွဲ့တွေယူဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ ပညာတတ်တစ်ယောက် မဟုတ်ရင်တောင်မိမိဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အခြားသူတွေဆီမှ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်တယ် စာများများဖတ်နိုင်ရင် လေ့လာနိုင်တယ် (စာအုပ် ၊ ကုန်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်း ၊ အစည်းအဝေး) (သို့) ရှေ့ဆက်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာများကို အခြားသူများထံမှ လေ့လာ နိုင်တယ်။ What have you learned recently that can get you closer to the success you want? If you haven’t picked upabook, trade magazine or listened to CDs or MP3s that can get you smarter in your field, it’s time to start. မင်းလိုချင်သောအောင်မြင်မှု ရရှိရန် မကြာသေးခင်ကမင်းအနီးစပ်ဆုံးသင်ယူမှု ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ? မင်းသာစာအုပ်မကိုင်ဘဲကုန်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်း လားရတယ်(သို့) မင်း CDs / MP3 နားထောင်ခဲ့ရင် လားရတယ် မင်းကျွမ်းကျင်နယ်ပယ်ကိုစတင်လို့ရပြီ။
They make mistakes and learn from them (အမှားတွေထဲကမှ သင်ခန်းစာယူခြင်း )
Successful people aren’t afraid to take risks. Because of their unshakable confidence, they treat any mistake asalearning opportunity. အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာစွန့်စားရမှာမကြောက်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ အခိုင်အမာယုံကြည်စိတ်ကြောင့် အမှားများကို သင်ခန်းစာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ်။ Think about the last mistake you made. Didn’t makeasale? Reevaluate your sales call and make it better next time. Screwed upapresentation? Readabook on how to present successfully so you can crush your next one. Failed in your last relationship? Call your ex and ask what you can do better with your next partner. So go take some risks, don’t be afraid of making mistakes, and if you stumble, learn from it so you can be better next time. နောက်ဆုံးမင်းလုပ်မိတဲ့ အမှားအကြောင်းတွေးပါ။ ဈေးရောင်းဘူးသလား? မင်းရဲ့ရောင်းအားကိုပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောင်တစ်ချိန်မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ အစီအစဉ်တင်ပြခြင်းများလွဲချော်ဘူးသလား? နောင်တစ်ချိန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကို စာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်တစ်ခါမှာအများကိုဖမ်းစားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ မင်းအချစ်မှာကျရှုံးဘူးသလား? မင်းသူ့ကိုနောက်တစ်ခါဘယ် လိုအဆင်ပြေအောင် ပြုမူရမလဲခေါ်မေးနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်စွန့်စားမှု အနည်းငယ်လုပ်ပါ ၊ မှားမှာမကြောက်ပါနှင့်။ ဒီတစ်ကြိမ် လွဲချော် ခဲ့ရင် နောင်တစ်ချိန်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ These are 10 things successful people do. How many of them are you doing today? If not all, or most of them, it’s time to upgrade your behaviors so you can get the success you deserve. မင်းဒီနေ့ အောင်မြင်သူများ၏ အချက်(၁၀) ချက်မှာဘယ်နှစ်ချက်လုပ်ပြီးပြီလဲ? အားလုံးမဟုတ်ဘဲ ၄င်းတို့ထဲမှ အများစုကိုလုပ်ပြီးပြီလား။ ဒါဟာမင်းကိုယ်မင်းသုံးသပ်ပြီး ပြန်လည် မြှင့်တင်ရမည့်အချိန်ဘဲ။ လေးစားစွာဖြင့် www.esmemm.com